Deeq ay soo dhiibaan Gabdho Soomaaliyeed oo Australia oo loo qaybiyay haween curyaamiin ah
» Deeq ay soo dhiibaan Gabdho Soomaaliyeed oo Australia oo loo qaybiyay haween curyaamiin ah
Deeqdaan lacageed oo ay soo dhiibeen gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa loo qaybiyay maanta haweenka naafada ah ee barakaca ku jooga duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Xaawo Cabdi.
Qeybinta deeqdan ayaa waxaa loosoo wakiishay C/weli Muuse inuu gaarsiiyo haweenkaas naafada ah ee Soomaaliya, kuwaasoo muddo afar sano ah halkaas ku jooga barakac.
Qadarta lacagta ay soo dhiibeen gabdhahaas ayaa waxay gaareeysay $2,020 (Laba kun iyo Labaatan Doolar), lacagtaasi oo markii loo bedelay shilling Soomaali, waxaana haweeney walba la siiyay 600,000 oo shillin Soomaali ah (Lix boqoloo kun oo shilin Soomaali ah).
Haweenka naafada ah ee loo qaybiyay deeqda waxay u mahadceliyeen gabdhihii Soomaaliyeed ee u soo dhiibay iyagoo Alle ka baryay inuu wax ka khayr badan ugu bedelo.
Deeqdan ayaa waxay kusoo beegantay xilli ay abaar daran ka jirto dalka, iyadoo ay si gaar ah xaaladda abaareed ay u saameysay naafada aan waxba qabsan karin, kuwaasoo ku tiirsanaa gargaar ay ka helaan walaalahooda Soomaaliyeed tan iyo markii ay guryahooda kasoo barakaceen.
Ugu dambeyn, haweenka naafada ah ayaa waxay ugu baaqeen in sidan si la mid ah ay u soo xusuustaan gabdhaha Soomaaliyeed ee qurba-joogta ah, iyagoo xusay in deeq walba oo loosoo dhiibo ay tahay mid ay u baahan yihiin.